ကျွန်တေ်ာတို့ ပြိုင်ပွဲတွင် လူပေါင်း ၉၀၀၀ကျော် ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး - ဒါဟာ အထင်ကြီးလောက်စရာ အရေအတွက်ပါ! ပါဝင်သည့်အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကံအားလျှော်စွာ၊ ပါဝင်သူအတော်များများသည် ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းချက်နှင့် မပြည့်စုံခဲ့ပါ - ဒါပေမယ့် စိတ်မပျက်ပါနဲ့၊ နောက်တစ်ကြိမ်မှာပိုဂရုစိုက်ပေးပါ!
ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသူအားလုံးသည် ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တစ်ခုစီရခဲ့ကြသည်။ ကံကအနိုင်ရမည့်သူကို ဆုံးဖြတ်သွားပါသည်: ကံထူးရှင်ကို သတ်မှတ်ရန် ကျပန်းနံပါတ်ထုတ်စနစ်ကို ကျွန်တေ်ာတို့သုံးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲကမှ ဆယ်ဦးသည် livestreamတွင် သူတို့၏နာမည်ကိုကြားခဲ့ရပြီး - iPhones Xအား ဆုလက်ဆောင်အဖြစ်ရခဲ့ကြသည်။
အခြားကံထူးရှင်များအနေဖြင့် အောက်ပါစာရင်းတွင် သူတို့၏ အမည်များအားရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ FBS အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်!